Wararka - Miyay Tilmaamaha Faleebada La sifeeyay Dhab ahaantii Ka Hortagayaan Is-Gudbinta Wasakhda iyo Aerosolka?
Talooyinka Faleebada la sifeeyay miyay kahortagaan wasakheynta iyo Aerosolka?
Sheybaarka dhexdiisa, go'aamada adag ayaa si joogto ah loo sameeyaa si loo go'aamiyo sida ugu wanaagsan ee loo sameeyo tijaabooyin iyo tijaabooyin muhiim ah. Waqti ka dib, talooyinka biibiileyaasha ayaa loo habeeyay si ay ugu haboonaadaan shaybaarada adduunka oo dhan waxayna siiyaan aaladaha si farsamayaqaannada iyo saynisyahannadu u leeyihiin awood ay ku sameeyaan baaritaanno muhiim ah Tani waxay si gaar ah run u tahay maadaama COVID-19 uu ku sii faafayo Mareykanka oo dhan. Khabiirada ku takhasusay epidemiologists iyo virologists waxay shaqeeyaan saacad kasta si ay ula yimaadaan daaweyn loogu talagalay fayraska. Fiilooyinka la sifeeyey ee la sifeeyey ee ka samaysan balaastigga ayaa loo isticmaalaa in lagu barto fayraska oo markii horeba weynaa, dhuumaha dhalada gala ayaa hadda ah kuwo jilicsan oo iswada. Wadar ahaan 10 talooyin balaastig ah ayaa loo isticmaalaa in lagu sameeyo hal tijaabo oo ah 'COVID-19' imika inta badan talooyinka la isticmaalo hada waxay leeyihiin shaandho iyaga ku jira oo loo maleynayo in laga joojinayo 100% aerosol-ka isla markaana laga hortago faddarada iskutallaabta marka la soo qaadanayo. Laakiin intee in le'eg ayay talooyinkan sida weyn uga qaalisan uguna qaalisan bey'adda runtii waxtar ugu leeyihiin shaybaarrada dalka oo dhan? Miyuu sheybaarradu go'aansadaan inay miirayaan miiraha?
Waxay kuxirantahay tijaabada ama tijaabada gacanta laguhayo, sheybaarada iyo xarumaha cilmi baarista waxay dooran doonaan inay adeegsadaan talobixinada bambooyin aan la sifeysan ama la sifeeyay. Shaybaarada badankood waxay isticmaalaan talooyin sifeeysan maxaa yeelay waxay rumeysan yihiin in miirayaasha ay ka hortagi doonaan aerosollada oo dhan inay sumeeyaan saamiga. Shaandheeyeyaasha ayaa badanaa loo arkaa inay yihiin hab kharash-ku-ool ah oo gebi ahaanba looga takhalusi karo raadadka sunta sunta laga soo qaaday, laakiin nasiib-darro sidaas maahan. Miirayaasha caarada caaga ah ee polyetylen ma ka hortagaan faddarayn, laakiin taa badalkeeda waxay kaliya gaabineysaa faafitaanka sunta.
Maqaal dhawaan la soo saaray oo la yidhaa Biotix ayaa lagu yidhi, “[ereyga] carqaladdu waa xoogaa macno-darro ah tilmaamahan qaarkood. Kaliya tilmaamaha-dhamaadka sare qaarkood ayaa bixiya caqabad dhab ah oo daboolan. Miirayaasha badankood waxay kaliya ka gaabiyaan dareeraha inuu soo galo foostada foosto. ” Daraasado madaxbanaan ayaa la sameeyay iyadoo la fiirinayo waxyaabaha kale ee lagu shaandheyn karo miirayaasha iyo waxtarkooda marka la barbar dhigo talooyinka aan filter-ka ahayn. Maqaal lagu daabacay joornaalka 'Microbiology Applied Microbiology', London (1999) wuxuu darsay waxtarka talooyinka miiraha polyetylenka markii la galiyo dhamaadka caarada furaha caarada marka la barbar dhigo talooyinka aan la sifeeyn. Imtixaanadii 2620 ka mid ah, 20% shaybaaradii waxay muujiyeen wasakheynta carryover sanka tuubada markii aan la isticmaalin shaandho, iyo 14% shaybaarada ayaa iswada gudbay markii la isticmaalay caarada miiraha polyetylen (PE) (Jaantuska 2). Daraasadda ayaa sidoo kale lagu ogaaday in markii dareere shucaac ah ama plasmid DNA la duubay iyadoo la adeegsanayo shaandho la'aan, wasakheynta foostada foosto ayaa ka dhacday gudaha 100 dhuumaha. Tani waxay muujineysaa in kastoo talooyinka la sifeeyey ay yareeyaan qadarka iskutallaabta ka soo baxa min caarada midab ilaa mid kale, miirayaasha ma joojiyaan faddarada gebi ahaanba.
Waqtiga boostada: Aug-24-2020